တီးတိန်မြို့တွင် အသက် ၂၀ အရွယ် လူငယ်တစ်ဦး စစ်ကောင်စီက ပစ်သတ် – Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»တီးတိန်မြို့တွင် အသက် ၂၀ အရွယ် လူငယ်တစ်ဦး စစ်ကောင်စီက ပစ်သတ်
တီးတိန်မြို့တွင် အသက် ၂၀ အရွယ် လူငယ်တစ်ဦး စစ်ကောင်စီက ပစ်သတ်
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့တွင် ယမန်နေ့ည ၁၀ နာရီဝန်ကျင်းခန့်က အသက်၂၀ အရွယ် Tg. Felix Thang Muan Lian ကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင်သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
“မနေ့ညက ၈ နာရီလောက် တီးတိန်မြို့လယ်ခေါင် နာရီစင်အနားမှာ ပေါက်ကွဲသံတစ်ခုကြားရတယ် နောက်ပြီး ၁၀ နာရီလောက်မှာလည်း သေနတ်သံကြားရတယ် အခုသေသွားတဲ့သူက Teeklui လမ်းခွဲမှာ ဓာတ်ဆီဆိုင်ရှိတယ်၊ အဲဒီဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ညအိမ်သွားတဲ့အချိန်ပစ်သတ်ခံလိုက်ရတာလို့သိရတယ်” ဟု တီးတိန်မြို့မှ ဒေသခံလူငယ်က ပြောသည်။
Tg. Felix Thang Muan Lian သည် ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ဆီဆိုင်ညစောင့်ရန်အတွက် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားနေစဉ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆရပြီး အလောင်းကိုလည်း တီးတိန်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံတွင် ထားရှိကာ သယ်ယူခွင့်မပြုသေးကြောင်း တီးတိန်မြို့မှ ဒေသခံလူငယ်တစ်ဦးကပြောသည်။
ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔ည ၁၀ နာရီ၀န္က်င္းခန္႔က အသက္၂၀ အရြယ္ Tg. Felix Thang Muan Lian ကို အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင္ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။
“မေန႔ညက ၈ နာရီေလာက္ တီးတိန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ နာရီစင္အနားမွာ ေပါက္ကြဲသံတစ္ခုၾကားရတယ္ ေနာက္ၿပီး ၁၀ နာရီေလာက္မွာလည္း ေသနတ္သံၾကားရတယ္ အခုေသသြားတဲ့သူက Teeklui လမ္းခြဲမွာ ဓာတ္ဆီဆိုင္ရွိတယ္၊ အဲဒီဓာတ္ဆီဆိုင္မွာ ညအိမ္သြားတဲ့အခ်ိန္ပစ္သတ္ခံလိုက္ရတာလို႔သိရတယ္’’ ဟု တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ ေဒသခံလူငယ္က ေျပာသည္။
Tg. Felix Thang Muan Lian သည္ ၎တို႔၏ ဓာတ္ဆီဆိုင္ညေစာင့္ရန္အတြက္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ သြားေနစဥ္တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရၿပီး အေလာင္းကိုလည္း တီးတိန္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရံု ရင္ခြဲရံုတြင္ ထားရွိကာ သယ္ယူခြင့္မျပဳေသးေၾကာင္း တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ ေဒသခံလူငယ္တစ္ဦးကေျပာသည္။